भारतबाट फर्किने क्यारेन्टाइन होटेल तोकियो, १० दिनमा कति खर्च लाग्छ ? पुरा पढ्नुहोस - खाडी न्युज
भारतबाट फर्किने क्यारेन्टाइन होटेल तोकियो, १० दिनमा कति खर्च लाग्छ ? पुरा पढ्नुहोस
May 5, 2021 India, कोरोना, क्वारेन्टाईन, नेपाल, भारत
काठमाण्डाै – सरकारले भारतबाट नेपाल आउने यात्रुका लागि काठमाण्डौका आठ वटा होटललाई क्वरेण्टीनका रूपमा तोकेको छ । २३ गते बिहीवारदेखि अरू सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भए पनि भारतबाट भने हप्तामा दुई वटा उडान हुनेछन् ।
कोरोनाको कारण एकैदिनमा सबैभन्दा बढी ५८ जनाको मृत्यु
संविधान बनेपछि पहिलो पटक अध्यायदेशबाट आज ४ बजे बजेट आउदै